Yasungulwa eChina ngo yokuqala yeminyaka BC, inhlanzi sauce wayebuye ethandwa eRoma yasendulo bese kuba iGrisi. Esikhathini Supplement kuya sauce soy, nguye spice esikhulu ukuze cuisine Asian. Sauce anosawoti omningi, eliyingqayizivele futhi Irreplaceable ukunambitheka, lisuselwa encazelweni isibilile izinhlanzi anosawoti, futhi sithuthukisa ngokuphelele ukunambitheka curry. Umbala sauce a brown ocebile obomvu-esobala noma segolide. Ezinye izinhlobo zama-inhlanzi sauce olungiselelwe nge eluhlaza izinhlanzi engajulile. Ngokuvamile isetshenziswa njengoba usawoti esikhundleni isinongo okubabayo singesokudla ethosiwe noma njengendlela marinade ukuze inyama noma inhlanzi. Traditional izinhlanzi sauce eVietnam eyaziwa ngokuthi nuoc nam, Philippines - Patis, Thailand - nam pla eThailand Japan - shottsuru. Kwezinye izifunda, futhi ibizwa nangokuthi i inhlanzi isobho noma inhlanzi sauce.
Kufanele kuqashelwe ukuthi inhlanzi sauce has a ukunambitheka ehlukile kakhulu muncu lapho ukuthambisa ngesikhathi yokupheka. Asian izinhlanzi sauce iyahluka kwenye nomunye. Ngokwesibonelo, Vietnamese izinhlanzi sauce bumnandi, ngoba inqubo ukuvutshelwa izinhlanzi kuwo ushukela kanye sauce Filipino, okuyinto njengoba Bagoong Monamon eyaziwa, has a ukunambitheka omuncu.
Namuhla, inhlanzi sauce ekhiqizwa nasemizaneni okudotshwa. Ukupheka izinhlanzi ezibekwe imiphongolo, ufafaze usawoti bese uzinika isikhathi esanele for ukuvutshelwa. Ngemva kwalokho, uketshezi kwakhiwa okuyinto e umgqomo isuswe ngokusebenzisa valve ezansi embizeni. Lapho inhlanzi inyama ukuvutshelwa kuqedile, it is elicwengekileyo futhi afakwe esitsheni esihlanzekile futhi nelanga. Lapho umkhiqizo ikhishelwa elangeni ngqo, ngcono kuyobahambela sauce kube luqhatshi bazolokhu - ngakho uthola ngowokuqala grade izinhlanzi sauce. amamaki lesibili nelesithathu ekhiqizwa ngu lokunameka izinsalela zasemfuleni futhi ushiye for ezimbili kuya kwezintathu ukuze uqhubeke ukuvutshelwa bese asemabhodleleni. Ekugcineni, izinsalela inhlanzi iphekwé ngamanzi usawoti, futhi uthole aphansi grade izinhlanzi sauce, okuyinto okuthandwa kakhulu ziyancipha. Ukuvumelana lwamanye nososo abasakwazi ezihlukahlukene - kungenzeka ukuba abanye babe ketshezi, kuyilapho abanye bafana ngaphezulu amazambane ecubuziwe.
Okuhle izinhlanzi sauce, Recep amathani okuyinto ulula, uzilungiselele ovela ingxube yenhlanzi nosawoti, owanhlanhlatha phezu kusuka ngonyaka 1 ezinyangeni ezingu-18. Isetshenziswa, ngokuvamile anchovies, nakuba kungenzeka ezinye izinhlobo sauce okulungiselelwe kwezinye izinhlobo zezinhlanzi, ezifana mackerel, tuna, izimfanzi, ngisho squid. Kukhona izindlela eziningi ekuwulungiseleleni, kodwa ezivame kakhulu njalo wathola izithako ezifana anchovies, usawoti namanzi. Ushukela angase engezwe, kodwa akudingekile. Ezitolo Vietnamese ungathenga izinhlanzi sauce kanye imifino.
Kulabo obakhathalelayo siqu sabo sodium eyanele, ukusetshenziswa nososo kungaba nenkinga enkulu. Kodwa ungakhathazeki. Uma okuqukethwe sodium kuviniga izinhlanzi kungase kubonakale njengento embi ngokwesabekayo, ungakhohlwa ukuthi leli nani kwasakazwa ngokulinganayo kuyo yonke umkhiqizo ukuthi ukupheka. Engeza kuphela ingxenye sauce inhlanzi, uyonikezwa njengoba kubaluliwe ku iresiphi, futhi wesabelo esele esikhundleni ngokuphepha uLwandle Lukasawoti - ke iqukethe ngaphansi kwe-sodium kuka abavamile usawoti.
Ukuze isidlo, esetshenziselwa ekulungiseleleni izinhlanzi sauce, azange abe nephunga ezingemnandi, udinga ukwengeza amaconsi ambalwa kalamula. Iningi Thai zokupheka sauce is kuhlangene lemon nezinye izithako okubabayo. Fish sauce ngokuvamile lingondliwa eceleni njengoba sauce eyinhloko ngokusebenzisa kwephunga laso elibi okukhulu. Kunalokho, livame ukusetshenziswa izitsha, okuyinto ekuqaleni abangu enenhlamba nezinye izinongo.
Ngokuba ukulungiswa zemvelo izinhlanzi sauce kuthatha isikhathi, ngakho-ke kwenziwa ezinkulu imikhiqizo. Nakuba ukupheka into efana lokhu kungenzeka futhi ekhaya. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukuhlanza salmon, susa amathambo bese uthathe izingcezu ezincane. Ikhasi izimfanzi bese uthathe 2-3 izicucu. Cod futhi uthathe yizicucu amancane, khama garlic ngokusebenzisa chesnokodavku. Ukuze izinhlanzi engeza amafutha omnqumo newayini emhlophe. Pheka kuze kube iwayini uye ayahwamuka. Engeza utamatisi, usawoti kanye pepper. Sauce kufanele igcinwe on ukushisa low imizuzu 30, ekupheleni engeza parsley oqoshiwe.
Indlela Fry amakhowe ekhaya
Ushizi, lwesinaphi, cream sauce. ukupheka zokupheka
Amakhekhe Ukudla Okusheshayo itiye nabangani
Dmitriy Iosifov - nomdlali abanamakhono futhi umqondisi
Thanda izincwadi kulo muntu: kweqiniso?